अव इन्काउन्टर हुने पालो कस्को ? यस्तो छ गुण्डा नाइकेहरुको राजनीतिक साइनो ~ FMS News Info
अव इन्काउन्टर हुने पालो कस्को ? यस्तो छ गुण्डा नाइकेहरुको राजनीतिक साइनो
नेपालमा राजनीतिमा अपराधीकरण र अपराधीको राजनीतिक करण कति विघ्न स्तरमा छ भन्ने कुरा त विगत १ वर्षको अवधीमा प्रहरीले २ चर्चित गुण्डा नाइकेको इन्काउन्टर गरेपछि सतहमा आएको छ । यति हुँदा हुँदै पनि राजनीतिक संरक्षणकै भरमा गुण्डाहरु बँच्न सक्दैनन् भन्ने पुष्टी चाँही प्रहरीको कारवाहीले गरेको छ । गत वर्ष एमाले निकट डन दिनेश अधिकारी ‘चरी’ प्रहरीसँग मुठभेडमा मारिएपछि कम भएको गुन्डागर्दी फेरि मौलाउन खोजेको समयमा प्रहरीले अर्का कांग्रेस निकट डन कुमार लामा घैंटेलाई तह लगाइदियो ।
घैंटेलाई प्रहरीले राजधानीमै शिकार बनाएपछि यहाँ राजनीतिक आड लिएर गुण्डागर्दी गर्दै आएका अन्य डनहरु पनि भागाभाग हुने संकेत देखिएको छ । तर कतिपयलाई भने उच्चस्तरको राजनीतिक संरक्षणको भरोसा रहेको पनि देखिन्छ । राजनीतिक संरक्षणमा पनि सुरक्षित हुने सुनिश्चित नभएपछि कतिपय डनहरुले देश छोड्ने तयारी गरेका चर्चा पनि चलेका छन् ।
सम्पति सुद्धीकरण विभागबाट मुद्धा परेर अकुत सम्पति कमाउने सूचीमा परेका डनहरु
लामो समयदेखि ठूला व्यापारिक घराना, निर्माण व्यवसायीदेखि विभिन्न व्यवसायमा संलग्न रहेका व्यक्तिहरूलाई तर्साएर आफ्नो धन्दा चलाउँदै आएका डनहरू प्रहरी आफूहरूमाथि आक्रामक ढंगले प्रस्तुत भएपछि नेपाल छोड्ने तयारीमा लागेका हुन् । महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले घैंटे मारिएपछि कुनै पनि गुण्डाले दुःख दिएको भए आफूहरुलाई खवर गर्न आग्रह गरेका थिए । प्रहरी श्रोत भन्छ- ‘प्रहरीले जुनसुकै पार्टीको संरक्षणमा रहेको भए पनि समाजमा आतंक मच्चाउने डनहरूलाई अब पालैपालो इन्काउन्टर गर्ने रणनीति बनाएपछि गुण्डाहरू पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन्’ । गुण्डाहरुको सम्पर्क राजनीतिक शीर्ष तहमा मात्र होइन कतिपय प्रहरी अधिकारीहरुसँग समेत रहेको भन्ने तथ्यबारे समेत प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
अहिले राजधानीमा गुण्डा गर्दी गर्ने ठूला डनहरुमा दीपक मनाङे, गणेश लामा, राजु गोर्खाली, मिलन चक्रे, साजन महर्जन, बाघे लामा, माइला लामा, रोज राणा, मिनकृष्ण महर्जन, बिश्वक्रान्तिहरु मानिन्छन् । काठमाडौं उपत्यकामा प्रहरी तथ्यांकले गुण्डाहरुको संख्या करिव दुई सय देखाएको छ । प्रहरीका अनुसार उनीहरु विभिन्न समूहमा आबद्ध रहेर आपराधिक गतिविधिमा संलग्न छन् । हत्या अभियोगमा दुई बर्ष कैद भुक्तान गरी छुटेका राजु गोर्खालीमातहत सबैभन्दा बढी तीन दर्जन गुण्डा संगठित छन् ।
विजय कुमार गच्छदारको राजनीतिक संरक्षण पाएका काभ्रेली समूहका नाइके गणेश लामा सदस्यका आधारमा दोस्रो नम्बरमा छन् । उनको नेतृत्वमा पनि करिव तीन दर्जन गुण्डा सक्रिय रहेका छन् । चक्रे भनिने मिलन गुरुङको समूहमा करिव ३५ गुण्डाहरु सक्रिय छन् । त्यस्तै संख्याका आधारमा बाघे लामा चौथौ नम्बरको नेतृत्वकर्ता देखिन्छन् । उनको समूहमा ११ सदस्य छन् । पाँचौ नम्बरको नेतृत्वकर्ता डाक्टर भनिने प्रवीण प्रधान छन् । उनको समूहमा निरज चित्रकार, रोमिन श्रेष्ठ, रघु राजभण्डारी, प्राचीन श्रेष्ठ, काजीमान श्रेष्ठ, पूर्ण गुरुङ, राजन लामा, निरज श्रेष्ठ, सन्जु श्रेष्ठ र महेन्द्र रन्त शाक्य गरी १० सदस्य छन् ।
छैटौ नम्बरको नेतृत्वकर्ता मिननकृष्ण महर्जन हुन् । उनको क्षेत्र पाटन हो । त्यसपछि चरीकै नामले चिनिने अर्का गुण्डा हुन्, विज्ञान श्रेष्ठ । त्यसपछि मनोज तुलाधर, महारानी डंगोल, मनोज श्रेष्ठ, सोल्टी गुरुङ, भरत श्रेष्ठ, सुनील कामी, दीपेन्द्र अधिकारी, आकाश श्रेष्ठ, सुमनरत्न शाक्य, समिर बस्नेत, सुदर्शन थापामगर, सुजन गुरुङ, सागर श्रेष्ठ, सुदीप थुलुङलगायत छन् ।
चर्चामा रहेका गुण्डासँग कुन राजनीतिक पार्टीको साइनो ?
चरी एमाले, घैंटे कांग्रेस
नेपाली राजनीतिमा गुण्डा र राजनीतिज्ञहरुको सम्बन्ध बुझिनसक्नु गहिरो छ । कुख्यात गुण्डाहरु कुनै न कुनै राजनीतिक नेताको संरक्षणमा छन् । गत वर्ष चरी मारिएपछि नेकपा एमाले धादिङका सभासदहरु संसदमा उफ्रिए । किन भने चरी गुण्डा मात्र होइन एमालेका जिल्ला नेता नै थिए । कुख्यात गुण्डा भनेर प्रहरी इन्काउन्टरमा परेका दिनेश अधिकारी चरीलाई एमालेले झण्डा ओडाएर विदाइ गरेको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले चरीलाई गोली लाग्दा उनलाई गोली हान्ने कुनै सन्त नभएको भन्दै चरीको बचाउ गरेका थिए । तर ओली निकट बामदेव गृहमन्त्री भएकै समयमा चरीको अन्त्य हुनुलाई अनौठो संयोग मानिएको थियो ।
कुमार घैंटे मर्दा सबैभन्दा बढी तनाव नुवाकोटमा राजनीति गर्ने नेपाली कांग्रेसका अर्जुननर सिंह केसी र उनका दाजु जगदिशश्वरनरसिंह केसीलाई भएको देखियो । उनीहरुले गृहमन्त्री बामदेव देखि प्रहरीलाई हत्यारा भन्ने समेतका तथानाम टिप्पणी गरे । कांग्रेसका २ सभाषद भीमसेन दास प्रधानले उनलाई सहिद घोषणा गर्न संसदमै समेत माग गरे । घैटेको मृत्युपछि कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ता ठूलो संख्यामा महाराजगन्जस्थिति शिक्षण अस्पतामा पुगेर प्रदर्शन गरे । उनीहरुले प्रहरीलाई हत्यारा भन्दै नारावाजी पनि गरे ।
घैंटेसँगै शिक्षामन्त्री चित्रलेखा याादव र सभाषद जगदिश्वरनरसिंह केसी
राजधानीका पुराना गुण्डा नाइके दिपक मनाङेका चेलाहरुले उनलाई उछिनेको चर्चा पुरानो भैसक्यो । २ दशक अघि देखि नै राजधानीको ठमेल क्षेत्रवर पर पकड क्षेत्र बनाएर काम गर्ने दिपक मनाङ्गेको क्षेत्रमा अन्य डनहरुले भागबण्डा गरिसकेका छन् । मनाङेलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको संरक्षण प्राप्त थियो ।
उनीमाथि पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले गुन्डागर्दीमार्फत १४ करोड ७४ लाख ३१ हजार रुपैयाँ बराबरको अवैध सम्पत्ति जोडेको भन्दै मुद्धा दायर गरेको थियो । तर उनी तीन महिना जेल बसेपछि २ करोड ९० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए । पछिल्लो समयमा मनाङे संघीय लोकतान्त्रिक पार्टीमा आवद्ध रहेको बताइन्छ ।
गणेश लामाः विजय कुमार गच्छदार
सिन्धु पाल्चोक देखि काभ्रे सम्मलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाएर रक्त चन्दनको कारोबारबाट चम्किएका गणेश लामा कुनै बेला अर्का डन दिपक मनाङेका सहयोगी मात्र थिए । रक्तचन्दन र रात्रीकालीन व्यवसायबाट आर्थिक रुपमा बलियो बनेका गणेश लामाले विस्तारै दिपकलाई छोडे र राजनीतिक संरक्षण लिए । उनी तत्कालीन गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसँग हिमचिम बढाउँदै उनकै पार्टीको नेता बनेर चुनावमा उम्मेदवार समेत बने ।
राजनीतिक बैठकमा सहभागी हुँदै कुमार लामा
विजय कुमार गच्छदारको संरक्षणमा रहेका लामा सँग सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले २७ करोड अवैध सम्पत्ति जोडेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्धा हालेको थियो । उनी उक्त मुद्धामा ३ करोड धरौटी बुझाएर रिहा भएका हुन् ।
मिलन चक्रेः एमाले
चक्रे मिलनलाई एमाले निकट नेताहरुको संरक्षण रहेको बताइन्छ । उनको एमालेका पूर्व मन्त्री प्रदिप नेपालसँग विशेष साइनो छ । पछिल्लो समयमा उनले राजनीतिमा आउन चाहेको बताएका थिए ।
एमालेको चुनावी कार्यक्रममा अतिथि बन्दा उनले २ लाख तिरेको चर्चा चलेको थियो । उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले ७ करोड ८ लाख रुपैंया अवैध सम्पत्ति जोडेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको थियो । तर उनले १ करोढड धरौटी तिरे जेलमुक्त भए ।
सुजन पौडेल ‘बाहुन डन': एमाले
बाहुन डन भनेर चिनिने सुजन पौडेल एमालेको जिल्ला राजनीति गर्ने ब्यक्ति हुन् । उन त उनी अहिले जेलमा छन् तर पनि उनको चर्चा सेलाएको छैन । उननलाई गत वर्ष गत असारमा भारतको लखनउबाट महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा, हनुमानढोकाले लागूऔषधसहित पक्राउ गरेर थुनामा पठाएको थियो ।
परशुराम बस्नेतः एमाले
सम्पति सुद्धीकरण विभागले गुण्डागर्दीबाट पैसा कमाएको भनेर छानविन गर्नेमा परेका विराटनगरका डन परशुराम बस्नेत एमालेका नेता नै हुन् । उनी युवासंघका केन्द्रीय सदस्य मात्र होइन अध्यक्ष ओली र उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतका प्रिय पात्र हुन् ।
बस्नेत पूर्वाञ्चल क्षेत्रका चर्चित गुन्डा नाइके हुन् । गुण्डा गर्दी गरी ११ करोड ६१ लाख ४१ हजार बराबरको सम्पत्ति कमाएको मुद्धा परेपछि उनले विशेष अदालतमा दुई करोड रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए । भिडियो हेर्न तलको बाकस थिच्नुहोस